ny tranga. Niampy 3 ny sitrana ka 44 ny totaliben’izy ireo, araka ny tatitra nataon’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. 77 izany no mbola manaraka fitsaboana. Tsy misy ny trangana fahasarotana mety haningotra ny ain’ny marary. Manan-kery sy mitoetra avokoa ny fepetra rehetra. Hitombo ny olona hifamezivezy manomboka anio. Tokony ho ireo olona voatery hiasa sy hianatra ihany no afaka hivezivezy fa tsy hoe miverina ny fiara fitaterana, dia handeha hitsangatsangana. Tokony ho olona manao saron-tava avokoa no ho hita eny. Tsy tokony hesorina mihitsy ny saron-tava, fa famitahan-tena ny fampidinana izany ho eo amin’ny saoka. Tokony ahitana ny fanamorana ny fanasana tànana daholo na any amin’ny birao, na any amin’ny sekoly, na eny amin’ireo olona miasa tena. Rehefa miverina ao an-trano, dia tokony hesorina ny kirary, ampandalovina amina ranon-tsavony. Rehefa voahaja izany tsy tokony hisy hatahorana. Atao fahazarana ny fisian’ny elanelana sy ny tsy fifampikasohana na aiza na aiza, toy ny eny ambony taksibe. Tokony hanaja izany ny olon-drehetra. Mila mitandrina ireo olona sokajiana ho marefo toy ny mihoatra ny 70 taona, manana aretina mitaiza,.. ireo olona manana toe-batana vaventy ihany koa dia efa voamarina ara-tsiantifika fa mora handairan’ity aretina ity. Ilana fitandremana be sy fadiana ihany koa ny fihinanana fanafody “anti-inflammatoire” tsy nahazoana torolalana sy toromarika avy amin’ny dokotera satria tena mampihena ny hery fiarovana izany.